“Waxaan sii wadi doonaa inaan istuur-tuuro” – Sadio Mané oo u jawaabay Pep Guardiola – Gool FM
(Liverpool) 07 Nof 2019. Weeraryahanka kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Senegal ee Sadio Mané ayaa ka jawaabay eedeymihii kaga yimid Pep Guardiola ee ahaa inuu istuur tuuro si rigoore loogu abaal-mariyo, wuxuuna sheegay inuu kicinaayo dareenka garsoorayaasha ee kulanka soo aadan ay wada ciyaari doonaan labada kooxood Liverpool iyo Man City.
Kooxaha Liverpool iyo Manchester City ayaa waxay markale xilli ciyaareedkan ku dagaalamayaan hanashada horyaalka Premier League, Reds ayaa haatan kaga hogaamineysa Sky Blue 6 dhibcood, kahor kulankooda soo aadan ay ku wada ciyaari doonaan garoonka Anfield.
Dhawaan ayey aheyd kadib markii uu Pep Guardiola xaqiijiyay inuusan dooneyn inuu ku tilmaamo xiddiga naadiga Liverpool ee Sadio Mané inuu yahay mid istuur tuur badan wuxuuna yiri:
“Ulama jeedin inaan ku dhibaateeyo ciyaaryahanka ama aan ku tilmaamo qaabkaas”.
Haddba Sadio Mané oo ka jawaab celinayay weerarka kaga yimid macalinka reer Spain ee Pep Guardiola ayaa sheegay inuu markale istuuri doono hadiiba uu rigoore ku helayo waxaana uu yiri:
“Hadalada Pep Guardiola? Waa hagaag, waan istuuri doonaa markale haddii ayba hubaal rigoore ii noqoneyso, laakiin wixii uu Jürgen Klopp sheegay waa run aniga isma tuurin”.
“Waa xariifnimo waxa uu doonayaa inuu soo jeediyo dareenka garsoorka, laakiin aniga waxaan ciyaarayaa mar walba kubadda cagta, kuma ciyaarayo dareenka waxa uu sheegayo, maxaayeelay waa qeyb ka mid ah kubadda cagta”.
“Laakiin waxa aan hubo ayaa waxay tahay inaan diyaar u ahay inaan ka hor imaado kooxda Pep Guardiola”.
“Run ahaantii, ma jecli inaan ka hadlo Manchester City, waxaan kaliya jecelahay inaan ka hadlo Liverpool iyo waxa aan ka qaban doonno kulanka aan wajihi doono iyaga, waxaan ku ciyaari doonaa qaab ciyaareedkeena, waxaana u dagaalami doonaa sida aan ku heli laheyn natiijo fiican, iyadoo aan indhaha ku heyn doono kulankan”.